Tsvangirai: Nyoresai Mazita Enyu Kuitira Kuti Mugovhotera MDC
Mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vanoti vatsigiri vebato ravo vanofanirwa kunyoresa mazita avo mugwaro revavhoti kuitira kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzichaitwa munyika gore rinouya.
VaTsvangirai vanoti sarudzo idzi dzinofanirwa kuitwa kana paine vaongorori vemasangano akaita seSADC ne African Union
Vachitaura kumhomho yevanhu mumusha weSakubva paSakubva Beit Hall neSvondo, VaTsvangirai vakati bato ravo rinoda kuti munhu wese weMDC azive kuti zvakakosha kunyoresa, nokuti kana usina kunyoresa, hauvhoti.
VaTsvangirai vakati sarudzo idzi dzinofanirwa kuitwa mushure mekunge pava ne voters roll itsva, uye sangano rakazvimirira rinenge richiona nezvesarudzo, kwete Zimbabwe Electoral Commission, iyo vakati ine makomishina akasarudzwa zvisina kurongeka.
Vamwe vatsigiri vakabvunza hutungamiri hwavo kuti MDC icharamba iri muhurumende here pakatariswa makakatanwa ari muhurumende iyi.
Vachipindura mubvunzo uyu, VaTsvangirai vakati MDC haisi kuzobuda muhurumende yemubatanidzwa kunyange hazvo paine zvinetswa zvavari kusangana nazvo zvinosanganisira kusazadzikiswa kwezvinhu zvemuchibvumirano cheGlobal Political Agreement.
Zvinetswa izvi zvinosanganisira kugadzwa kwemagavhuna ematunhu, gavhuna webhanga renyika, vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika pamwe chete nekusapihwa mhiko kwaVa-Roy Bennet semutevedzeri wegurukota rezvekurima.
Mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vakati misangano yavari kuita nevatsigiri vavo yakanangana nekusangana nevatsigiri veMDC uye kusimbisa hutungamiriri hwebato iri mumatunhu ose enyika vasati vatarisana nesarudzo gore rinouya.
Vamwe vaiva naVaTsvangirai vanosanganisira munyori mukuru webato iri, uye vari gurukota rezvemari, VaTendai Biti, gurukota rezvedzimba, VaGiles Mutsekwa, gurukota rezvemukati menyika, uye vari sachigaro wezvemadzimai, Amai Theresa Makone, munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvematongerwo enyika muMDC, VaElias Mudzuri, nevamwewo.